ရိုး ရိုး ဘ လော့ဂ် : အဏ္ဏဝါရွှေ (သို့မဟုတ်) အယုဒ္ဓယ အကျဉ်းသား
အင်္ဂလန် နှင့် ဥရောပ တိုက်တခွင်ကို ရေထွက်ပစ္စည်း တင်ပို့တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ က ထိပ်ဆုံးက ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ရဲ့ အဓိက စည်းပွားရေး တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ရေထွက်ပစ္စည်း တင်ပို့ရေးမှာ အလုပ်သမားတွေဟာ ငါးဖမ်း၊ ပိုက်ချ၊ ပိုက်ဆယ်၊ ငါးရွေး၊ အကြေးသင်၊ ရေဆေး၊ ပါကင်ထုတ် ၊ချိတ်ပိတ်အဆုံး အထိ လုပ်ကြရပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားတွေ ကို အသုံးများပြီး ဒီအလုပ်အမား အများစုဟာ မြန်မာနိုင်ငံက ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဒီနေ့ ဘီဘီစီ ၂၄ နာရီ သတင်းချာနယ် မှာ ထုတ်လွင့် မှုဟာ မြန်မာအလုပ်သမားတစ်ချို့ ရဲ့ ဘဝ ကို မီးမောင်း ထိုးပြခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် ကိုဇော်ဇော် က သူဟာ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းမှာ (၃)လတိတိ အတင်းအကြပ် စေခိုင်းခံခဲ့ရာမှ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အတွေ့ အကြုံ အရ သူရဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် (၃)ဦးဟာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားမှုကြောင့် အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အလုပ်ရှင်တွေ ဟာ အလုပ်သမားတွေ သောက်တဲ့သောက်ရေမှာ ဆေးခတ်ပြီး နာရီပေါင်းများစွာ ခိုင်းစေ ကြပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်အကိုင် ရှားပါး ကြပ်တည်းမှုကြောင့် ကိုဇော်ဇော်ဟာ မြန်မာပြည်ကနေ ထိုင်းက စက်ရုံတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက် နှင့် တောလမ်းကနေ တရားမဝင်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ လမ်းမှာ ထိုင်းပွဲစားဟာ မြန်မာ အမျိုးသမီး ၂ ဦးကို မတရားပြု့ ကျင့်ပြီး သူတို့ကို ရိုက်နှက်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ပွဲစားတစ်ဦး က နေ နောက်တစ်ဦး အကြိမ်ကြိမ် လက်ဆင့်ပြောင်းပြီး နောက်ဆုံး ငါးလှေပေါ်ကို အရောင်းခံရတာပါဘဲ။ သူ့ ဖာသာသူ ငွေဝယ်ကျွန်ဖြစ်နေမှန်တောင် သူမသိခဲ့ပါဘူး။
အိပ်ချိန်နည်းနည်းသာခွင့်ပြုပြီး နေထိုင်မကောင်းသူတွေကို ရိုက်နှက်ပါတယ် ။ ရေလုပ်သားများဘဝ ဟာ သေဘေးနဲ့ အင်မတန် နီးစပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုဇော်ဇော်ဟာ အင်မတန်မှ ထွက်ပြေးလွှတ်မြောက် လိုခဲ့ပါတယ်။
ရေလုပ်သား (၃)ဦး ဟာ မနက် ၂ နာရီ အချိန်မှာ ရေပေါ်ပေါ်စေတဲ့ ဖေါ့တုံးလို အရာကို ဆုတ်ကိုင်ပြီး ပင်လယ်ထဲ ကို ခုန်ချထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ ၂ ဦးက ရေမကူးနိုင်လို့ရေနှစ်ပြီး ကျန်တစ်ဦးကတော့ ကမ်းပေါ်ရောက်တာ န့ဲ ဖမ်းမိပါတယ်။ ဖမ်းမိသူကို ငါးဖမ်းသဘောင်္ပြန်ခေါ်လာပြီး မျက်နှာများ ဖူးရောင်နေတဲ့ အထိ ထိုးကြိတ် ရိုက်နှက် ပြီး နှိပ်စက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် သင်္ဘော ကုန်းပတ်ပေါ်ကို ခေါ်လာပါတယ်။ ဒီ လူကို လျှပ်စစ်ရှော့ န့ဲတို့ ပြီးနှိပ်စက်ပါတယ် နောက် ကျန်အလုပ်သမားများရှေ့မှာ သေနတ်နဲ့ ပစ်သက်ပြီး ရေထဲ ပစ်ချ ခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီလို ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားရင် ဒီလို ခံရမယ်လို့ထိုင်းလူမျိုး ကက်ပတိန်က နမနာပုံစံမျိုးသူတို့ကိုပြောပါတယ်။
ရေလုပ်သားတွေဟာ သစ်သားဖာသေးသေးလေးတွေ ထဲမှာ ကျဉ်းကျဉ်းကျပ်ကျပ် အိပ်ရပါတယ်။ လူသေခေါင်းဆန်ဆန် ပုံစံမျိုးလို့ ပြောပါတယ်။ အချက်ပေးခေါင်းလောင်းသံကြားတာနဲ့ အိပ်ရာက ထပြီး အလုပ်ထဲ တန်းပြေးရပါတယ်။
သင်္ဘောကက်ပတိန်ဟာ အမ်ဖက်တမင်းဆေးပြား ၁၅လုံး အလုံး ၂၀ လောက်ကိုကြိတ်ပြီး သောက်ရေထဲ ထည့်တာကို တွေ့ ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆေးပြားဟာ အလုပ်လုပ်နှုံးကို မြန်စေပြီး ဆေးအရှိန်ပြယ်တဲ့ အခါမှာ ဆိုးရွားတဲ့ ခေါင်းကိုက်မှု ကျန်ခဲပါတယ်တဲ့။
သူ့ရှေ့ မှာ လူ (၃)ဦး ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားလို့ သေခဲ့တာ ကို မြင်ခဲ့ရပြီး တချိန်မှာ သူ့အလှည့်ဖြစ်လာနိုင်တာမို့အမြန်ဆုံး ရုန်းထွက် ဖို့ဆန္ဒပြင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ငါးဖမ်းသင်္ဘော ကမ်းကပ်တဲ့ အချိန် ည(၁)နာရီ မှာ သူဟာ ရေပေါ်စေတဲ့ ဖေ့ာတုံး ကိုယူပြီး ပင်လယ်ထဲ ခုန်ချ ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ဟာ အရမ်းကြမ်းပြီး ကမ်းစပ်ကို ရောက်တဲ့အချိန်ကတော့ မနက် ၆ နာရီရှိပါပြီ။ သူဟာ ကမ်းစပ်က ခြုံပုတ်တွေ နားမှာ ပုန်းနေခဲ့ပါတယ်။သဘောင်္ပေါ်က အလုပ်ရှင်တွေ ဟာ သူပုန်းနေရာ နေရာထိလာရှာခဲ့ ပေမဲ့ သူကို ကံကောင်းထောက်မစွာ မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။
(၄)ရက်ကြာ လမ်းလျှောက်အပြီးမှာ ပတ္တယား မြိ့ု ကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းတစ်ခုက နေ သူ့ကိုကူညီခဲ့ပြီး အခုတော့ ဘန်ကောက်မှာ တရားဝင် အလုပ်လုပ်နေပါပြီ သူ့လို ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ သူတွေကို တဖက်တလမ်းကနေ ကူညီနေခဲ့ပါတယ်။ ငါးဖမ်းသင်္ဘောပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ သူ လခ တပြားမှ မရရှိခဲ့ပါ။
ဘီဘီစီက ကိုဇော်ဇော်လို မြန်မာ တွေကို အင်တာဗျူးခဲ့ပါတယ်။ ဆိုးရွားတဲ့ မတရားခိုင်းစေမှု၊ နှိပ်စက်မှု၊သတ်ဖြတ်မှု စတဲ့ တရားမဲ့မှုတွေ ကိုထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာ ဆင်းရဲသား ရေလုပ်သား တွေရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။
တစ်ချို့ ဆို ရင် ကမ်းကို မကပ်ဘဲပင်လယ်ထဲမှာ နှစ်ရှည်လများနေခဲ့ကြရပါတယ်။
ငါးဖမ်းသင်္ဘောသေးသေးကဖမ်းလို့ရတဲ့ ငါးကို ပင်လယ်ထဲမှာဘဲ သင်္ဘောကြီးကြီးပေါ်တင်သယ်တယ် ။
ငါးဖမ်းသင်္ဘောပေါ်က လူတွေဟာ ဒါတွေကြောင့် ကမ်းကပ်ဖို့ အခွင့်အရေးနည်းပါးပါတယ်။
မဟာချိုင်ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ငါးဈေးကွက် ကြီးကြီးရှိ ရာမြို့ တစ်မြို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မနက်တိုင်းမနက်တိုင်း ငါးလာချတဲ့လှေတွေ အများကြီးပါ။ အဲဒီလို ငါးဖမ်းလှေ တစ်စီးမှာ ထိုင်းလူမျိုးကက်ပတိန်၊ အင်ဂျင်နီယာ အပြင် မြန်မာ ရေလုပ်သား ၂၀ ခန့် ရှိပါတယ်။
ငါးဖမ်းလှေ မှာသာ ဒီလို တရားမဝင် အလုပ်သမားတွေကို ခိုင်းစေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပါကင်ထုတ်တဲ့ အဆင့်အထိ ဒီလို အလုပ်သမားတွေကို ခေါ်သုံးပါတယ်။ စက်ရုံအလုပ်သမား အသက်၁၈ နှစ်အရွယ် မြန်မာအလုပ်သမား တစ်ဦး ကတော့ ရေလုပ်ငန်း စက်ရုံကနေ ဘယ်မှ ထွက်ခွင့် မရှိခဲ့တာ (၄) နှစ်ရှိပါပြီ တဲ့။ တစ်နေ့ ကို ၁၅ နာရီကနေ ၂၀ နာရီ အထိ အလုပ်လုပ် ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အလုပ်ခွင်ဟာ ထောင်တစ်ခု န့ဲ တူတယ်လို့ပြောပါတယ်။
ထိုင်း အာဏာပိုင်တွေ ကတော့ ဒီလို ကိစ္စတစ်ခုချင်း တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာ ထင်မြင်ချက်မှ မပေးပါဘူး။သို့ သော်လည်း ဥပဒေအရ ဒီလို ကိစ္စမျိုး မဖြစ်အောင် ကာကွယ် ထားတာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေး တောင်းဆိုသူတွေ ကတော့ ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ထိရောက်တဲ့ ဥပဒေတားမြစ်မှုတွေ နဲ့ပို လုပ်ပေးသင့်တယ် လို့ ထင်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံက မြန်မာရွေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့လူ့ အခွင့်အရေး ကာကွယ်မှုအဖွဲ့ မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ Andy Hall က "ထိုင်းနိုင်ငံ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းမှာ မတရားစေခိုင်းခံနေရတဲ့ အလုပ်သမားတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံ န့ဲ နိုင်ငံအသီးသီး က ပို့ ကုန်တွေ ရဲ့ မူရင်းဇစ်မြစ်ကို သတိထားသင့် ပါတယ်။
ထိုင်းကထွက်တဲ့ ရေထွက်ပစ္စည်း ဖြစ်တဲ့သား၊ငါး၊ပုဇွန် ဝယ်တယ် ဆိုရင် ဒီပစ္စည်းတွေ ဟာ (လူမဆန်စွာ မတရားခိုင်းစေခံရတဲ့ ၊ အလုပ်သမားနင်းပြားတွေ)ဆီကတဆင့် ထွက်လာတယ်ဆိုတာ ကို သတိထားသင့်ပါတယ်။ ဒ့ါကြောင့် ဝယ်ယူ စားသုံးသူတွေ ဟာ ထိုင်းအစိုးရ ကို ဒီလို မတရားမှုတွေ လျှော့နည်းအောင် ဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုပေးသင့်တယ်" လို့ဆိုပါတယ်။
Made in Thailand လား၊? Products from Thailand လား။ ?
Ref: BBC 24 news
အောက်ပါ ယူကျူ့ဗီဒီယိုလင့်ကလေး ကတော့ နိုင်ငံခြားဘာသာနဲ့ ကြေငြာပြီး မြန်မာ စကားပြော အနည်းငယ်ပါတဲ့ မြန်မာရွေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေ ရဲ့ အခြေအနေ အရပ်ရပ် ကို တင်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှု စားကြည့်လိုက် ကြပါဦး။
Posted by ရိုးရိုး at Tuesday, April 26, 2011